पावरामा पुल बन्दैः ज्यानकै जोखिम मोलेर स्कूल जाने बाध्यता हट्दै « Mayadevi Online News Portal
पावरामा पुल बन्दैः ज्यानकै जोखिम मोलेर स्कूल जाने बाध्यता हट्दै
प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७७ आईतवार १७:२४
अर्घाखाँची सिमलपानीको वाणगंगा खोलापारी पावरामा विद्यालय छ । करिब ३ सय मिटर हिँडेपछि स्कुल पुगिन्छ । तर, बीच बाटो मै पर्ने बाणगंगा नदी तरेर स्कूल जान नसक्दा सयौं विद्यार्थी पढ्नबाट बन्चित हुँदै आएका छन् । हिउँदमा तर्न सकिने वाणगंगा बर्खामा भने तर्न सक्ने उपाय नै छैन ।
पढाई बिग्रीने डरले आत्तिएका विद्यार्थी जनतन स्क्रल जान खोज्दा उनीहरु जोखिम मोलेरै जान बाध्य छन् । खोला तर्न नसके घरबाटै विद्यालय भवन हेरेर बस्नु बाहेक विक्रमसोताका बालबालिकासंग अर्को उपाय नै छैन । तर, हालै मात्र उर्जा जलश्रोत सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले पुलको शिलान्यास गरेपछि यहाँका स्थानीयबासिन्दा निकै खुसी देखिन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जोड्ने विक्रम–पावरामा पक्की पुलको काम शुरु
जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिका–१४ सिमलपानीको पावरा र विक्रमसोतामा बाक्लो बस्ती छ । खोलापारी पावरमा माध्यमिक विद्यालय छ । अभिभावकलाई छोराछोरी नियमित विद्यालय पठाउने मन भएर पनि खोला तर्न सकिँदैन ।
लेदोसहितको बाढी आइरहन्छ, विक्रमसोताका स्थानीय होम बहादुर पल्लीले भने–‘वरिपरी जंगलले घेरिएको बस्ती छ । बिक्रमसोतातिर घाम लागेको बेलामा पनि खोलामा बाढी आएको हुन्छ । बर्खाभरि जोखिम धेरै हुन्छ ।’
दुई बस्तीको बीचमा पुल बनाइ दिन स्थानीयले गुहार मागेको लामो समय पछि पुलको शिलान्यास भएको छ, आफू निकै खुसी भएको पल्लीले बताए । उनले भने, ‘अब पुल बन्यो भने छोरा छोराछोरीले जोखिम मोलेर स्कुल जान पर्दैन ।’
वाणगंगाले बर्सेनी बस्ती कटान गर्छ । बाढीले गाउँ डुब्छन् । चुरे संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत भएपनि लामो समय देखि यस क्षेत्रमा पुल बन्न सकेको थिएन ।
पहाडको जंगलमा बस्ती छरिएर रहेको छ । कतिबेला खोलामा बाढी आउँछ पत्तै हुँदैन, स्थानीय वीरबहादुर खाम्चाकीले भने, ‘साना बालबालिकाको लागि खोला तर्नु जोखिम हुन्छ ।’
बाढीले बगाएर बेपत्ता पार्ने डरले बर्खाभरि कोही पनि खोला तर्दैनन् । घरमा बसेर अभिभावकले पढाउनेबाहेक अरू विकल्प छैन् । कक्षा ५ सम्म विक्रम गाउँकै स्कुलमा अध्ययन गर्छन् । त्यसपछि ६ कक्षाबाट १० सम्म पढ्न यहाँका बालबालिका पावर मावि जानुपर्छ । तर अहिले पक्की पुल बन्न लागेको छ । समयमै पुल बनेर छोराछोरीलाई सजिलै स्क्रल पठाउन सकियो भने बर्षायाममा घरबाट स्कुल नपुग्दा र बेलुका घर नफर्किदासम्म लाग्ने छोराछोरीको चिन्ता हट्ने थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस विक्रम पावरामा निर्माण हुने पक्की पुलको सरकारी टोलीद्धारा स्थलगत निरिक्षण
बर्खाभरी पढाइ छुट्छ, छात्रा कबिता थापाले भनिन्, ‘घरबाट पावरा मावि स्क्रल छर्लङ देखिन्छ । तर, के गर्नु बाधक खोला बनिदियो । पुलको शिलान्यास त भयो बेलैमा पुल बन्न सकेमा स्कुल जान बर्षायाममा जोखिम बेहोर्नु पर्ने थिएन, उनले भनिन् ।
बर्खाभरी विक्रम गाँउमा छुट्टै कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गर्दै आएका थिए । त्यही विद्यालयकी विमला रेश्मीले बर्खाभरी घरमै किताब पढ्छिन् ।
‘हिउँद सुरु भएपछि साथीसँग सरले पढाएको होमवर्क सारेर पढ्छु, तर, कक्षामा गएजस्तो हुँदैन । एक हातमा स्कुलका ड्रेस अर्को हातमा किताव कापी समाएर दुबै हात माथीगराई टाउकोमा किताब राखेर खोला तरेर स्कुल जान बाध्य भएको उनले गुनासो गरिन् ।’
खोला तरिसकेपछि लगाएका कपडा खोलाको किनारमा सुकाएर स्कुलका ड्रेस लगाएर विद्यार्थी स्कुल पुग्ने गर्दछन् । पढाइ नियमित नभएपछि यहाँका विद्यार्थीको नतिजा पनि दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको छ । खोलाका कारण उनीहरू कक्षामा पछाडि परेका छन् ।
माथिल्लो निकायमा दक्षिण खाँचीबाट नेतृत्वमा पुग्न नसक्दा प्रदेश र संघीय सरकारमा पुगेका सभासदहरूले उत्तरखाँचीमा जस्तो बिकास दक्षिणखाँचीमा गर्न नचाहेको सधै दक्षिणखाँचीलाई उपेक्षित गरेको यहाँका स्थानीयबासिन्दा बताउँछन् ।
देशमा बल्ल सरकार भएको अनुभूति – प्रअ
करेचुली, बठेनी, मुन्द्रीबास, बिक्रम, गन्दी, सुखौरा, हडाहा, ढाबा, पावराबाट विद्यार्थी पढ्न आउने गर्दछन् । अहिले विद्यालयमा ४ सय २२ विद्यार्थी अध्यनरत छन् । जसमध्ये झन्डै ३ सय विद्यार्थी दैनिक खोला तरेरै स्कुल आउनुपर्छ, प्रध्यानाध्यापक नहकुलमान रेश्मीले बताए ।
प्रअ रेश्मीले भने, ‘विद्यार्थीलाई आवत जावत गर्न निकै कठिन भइरहेको समाचार पटक पटक अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोमा प्रकाशन र प्रशारण भएपछि अहिले पुलको शिलान्यास भएको छ । पुल बन्न थालेपछि बिद्यार्थी, अभिभावक, यस क्षेत्रका नागरिकमा खुसी पलाएको छ । समयमै पुल बन्नु पर्छ ।’
विद्यार्थीको खोला तर्दा कति किताव, कपडा बगायो, यस्तो समस्यासँग सामना गर्दै साना विद्यार्थी स्कुल आउदा समेत यस क्षेत्रमा झोलङ्गे पुल भएपनि बनाउन कसैले चासो नदिँदा देशमा सरकार नै नभएको महसुस हुने गरेको प्रअ रेश्मीले बताए । तर, अहिले यहाँका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै पक्की पुल बन्न थालेपछि देशमा सरकार भएको अनुभूति भएको प्रअ रेश्मीको भनाई छ । हिउँदमा सजिलो ठाउँबाट खोला तर्न सकिए पनि बर्खाको समयमा खोला तर्न सकिँदैन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कपिलवस्तु– अर्घाखाँचीको सिमानाका पावरामा बनेन पूल, आवतजावतमा समस्या
पुल कस्तो बन्ने ?
पुल निर्माणको जिम्मा रौतहा धुलिखेल सुगन जे.भि. कम्पनीले लिएको पुलको लम्बाई ७५.१५ मिटर, चौडाई बढी लामो १२ मिटर चौडाईको डबल गाडि हिँड्ने पक्की पुल निर्माणको लागत ९ करोड ८० लाख १६ हजार २ सय १ रूपियाँ ९९ सय पैसा रहेको छ ।
गत २०७७ साल भदौ ९ गते संझौता भई मिति २०७९ साल फाल्गुन ८ गते (३० महिना भित्र) पुल निर्माणको काम सक्नु पर्ने गरि काम अघि बढेको सडक डिभिजन शिवपुर कार्यालयका प्रमुख रामकुमार दियोले बताए । दियोले भने, ‘फटाफट काम भएमा २ वर्ष भित्रमा पुलनिर्माणको काम सम्पन्न हुने छ ।’
पिपरा–पावरा सडक खण्डमा पर्ने बाणगंगा नदीमा पुल बन्न थालेपछि सवारी साधन, बिद्यार्थीलाई आवत जावत गर्न सजिलो हुने भएपछि यस क्षेत्रका स्थानिय निकै उत्साहित देखिन्छन् । बर्खामा खोला बढेपछि अधिकांश विद्यार्थी घरमै बसेर पढ्न बाध्य छन् ।